Barcelona oo garoonkeeda Camp Nou guul dirqi ah kaga gaartay 10 xiddig oo kooxda Real Valladolid ah… +SAWIRRO – Gool FM
Barcelona oo garoonkeeda Camp Nou guul dirqi ah kaga gaartay 10 xiddig oo kooxda Real Valladolid ah… +SAWIRRO
(Barcelona) 05 Abriil 2021. Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou guul dirqi ah kaga gaartay 10 xiddig kooxda Real Valladolid, kaddib markii ay kaga adkaatay 1-0, ciyaar qeyb ka aheyd kulammada toddobaadkan ee horyaalka La Liga dalka Spain.
Barcelona oo garoonkeeda Camp Nou barbardhac kula dhaafi weysay 10 xiddig kooxda Real Valladolid
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Barcelona iyo Real Valladolid ku kala nasteen barbardhac 0-0 ah.
Daqiiqadii 90-aad Ousmane Dembele oo caawin ka helay saaxiibkiis Ronald Araujo ayaa hoggaanka u dhiibay kooxda Barcelona wuxuuna dheesha ka dhigay 1-0.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1-0 ay kaga adkaatay Barcelona kooxda Real Valladolid oo ku soo booqatay garoonka Camp Nou, Blaugrana ayaa kala baxday Real Madrid booska labaad waxayna sidoo kale 1 dhibic u jiraan hoggaamiyaasha horyaalka Atlético Madrid, kaddib markii ay uruursadeen 65 dhibcood.
Xiddig ka tirsan Real Madrid oo wax dood ah aan ka qabin u dhaqaaqista kooxda Liverpool